Inqubomgomo yokubuyisela imali - Sparky Express®
Lapho ucingo selufakiwe, sizoqala siqinisekise ukuthi singakunika insizakalo edingekayo, lapho-ke sizokuya endaweni yakho ukuhlinzeka ngosizo lwethu lomgwaqo. Sicela uphendule imibuzo yethu ngokwethembeka, njengoba imali yesevisi ifanele kwezinye izimo noma ngabe inkinga ibingalungisiwe.
Uma kwenzeka kuqhuma isondo: uma sikubuza ukuthi unalo yini isondo lokugcina emotweni yakho, futhi uyaqinisekisa, kodwa lapho ubuchwepheshe bethu bufika, sithola ukuthi empeleni awunalo isondo eliqhuma futhi isondo lakho alikwazi ukulungiswa (liqhume, lisike kakhulu, ligobile rim, njll.), imali encane ekhokhwayo ifanelekile ukuba khona kwethu. Imali encane ingu- $ 40.
Uma kwenzeka isicelo sokuqinisa ibhethri: lapho ucela insizakalo yethu yokuqinisa ibhethri, sicela uphendule imibuzo yokuxilonga ngokuthembeka. Isibonelo, uma injini yakho yemoto ifile ngenkathi imoto yakho isebenza, kungenzeka kakhulu ukuthi inkinga akuyona ibhethri, kodwa enye inkinga kagesi, noma inkinga yenjini. Uma imininingwane engalungile sinikezwa yona, futhi i-tech yethu ifika esizeni, kudingeka imali eyi- $ 40 encane.
Imvamisa, siyakwazi ukubuyisela bonke abashayeli emgwaqeni. Uma isevisi inikezwe, zonke izimali zesevisi seziphelile futhi azinakuxoxiswana, ngakho-ke azikho izimbuyiselo.